Faah faahin:- Madaafiic hoobiyaal ah oo maanta lagu garaacay qeybo ka mid ah Muqdisho - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Madaafiic hoobiyaal ah oo maanta lagu garaacay qeybo ka mid ah Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic hoobiyeyaal ah oo gelinkii dambe maanta kusoo dhacay deegaano ka tirsan degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Madaafiicdaan oo la rumeysan yahay in laga soo tuuray duuleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Kaxda iyo meelaha u dhaw dhaw ayaa la sheegayaa inay ku dhaceen xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafada Kaawo-Godey oo dhawaan uu qaraxa ka dhacay.
Warar hordhac ah oo ay warbaahinta Bulshoweyn heleeyso ayaa sheegaya in madaafiicdaasi uu ku dhintay 1 qof, iyadoona 4 kale ay ku dhaawacantay.
Afarta qof ee dhaawacantay ayaa la sheegayaa inay ahaayeen seddax caruur iyo qof dumar ah, waxaana dhaawacooda la geeyay Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Inta badan weerarada ceynkaan oo kale ah ayaa ayaa waxaa sheegta Xarakada Al-shabaab, wuxuuna weerarkaan dhacay wax yar kadib markii lasoo gaba-gabeeyay xafladda caleemo saarka madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.